Global Voices teny Malagasy » Shina: Voasakana ao Shina ny Twitter, Flickr, Bing. · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 29 Jolay 2018 8:44 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika (fr) i Rafik, imanoela fifaliana
Sokajy: Shina, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, GV Mpisolovava
Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny jona 2009
Tamin'ny alina alohan'ny faha-roapolo taona nitsingerenan'ny 4 jona (tranga tao Tiananmen) , nitatitra ireo sinoa mpampiasa aterineto fa tambajotra sosialy sy serasera maro no voasakana ao Shina, anisan'izany ny Twitter, Flickr, Bing, Youtube, Blogspot, sns.
Ao amin'ny Herdict , tranonkala fanarahamaso ny sivana an-tambajotra, manamarina ny fanakanana ny Twitter  efa hatramin'ny omaly (2 jona 2009) ny tatitra maro manerana an'i Shina . Voasakana efa hatramin'ny tapaky ny volana May ny sehatra fanaovana blaogy Blogspot ary afaka nidirana ary avy eo nosakanana ny Youtube  nandritra ny fotoana lava. Tafiditra tao anatin'ny lisitr'ireo tranonkala voasakana tamin'ny alina talohan'ny fitsingerenan'ny 4 jona ny Windows Live , Flickr  sy ny Bing  .
Voasakana nandritra ny fotoana fohy ny imailaka Hotmail  ary avy eo naverina ny fahafahana miditra aminy taorian'ny ora roa. Novelomin'ny Twitter ny fidirana amin'ny https (fidirana tsy fantatra anarana) ho valin'ny antson'ireo sinoa mpampiasa aterineto. Ankoatra izany, mbola azo idirana foana ny fanitarana sasany avy amin'ny Twitter, fitaovana toy ny Twitterfox.
Tao anelanelan'izany, ny tenifototra #fuckGFW  no lasa tenifototra nampiasaina indrindra tao amin'ny Twitter. Ampiasain'izy ireo ity tenifototra ity mba hanehoana ny hatezerany, hifanakalozany vaovao any amin'ny fitaovana fialàna ilay GFW (Fanamarihana: ”Great Firewall of China”, ilay Rindrinafo Lehibe mpiambina ny aterineto ao Shina)  ary hizarany ny fanavaozana farany mikasika ilay fanakanana.
Niantso ny 2 jona ho andron'ny GFW (amin'ny teny sinoa) ny blaogera TSW, satria miatrika mivantana ny herisetran'ny fanjakana amin'ny fanarahamaso ny vaovao ireo mpampiasa aterineto. Ny sasany mizara vaovao amin'ny fomba hialàna amin'ilay GFW.
Manoro  ny fampiasana ireo tambajotra manokana virtoaly an-tambajotra i Wodingdong: Tor, Hotspot Shield Launch sy ny OpenVPN GUI. Manolo-kevitra amin'ny fampiasana ireo fidirana amin'ny tolotra kilasy fahatelo  mba hidirana amin'ny Twitter i Kenengba.
Efa nandrasana hatramin'ny nanakanana ny Blogspot tamin'ny tapaky ny volana May ny fanakanana ny Twitter. Ny manahirana ireo sinoa mpampiasa aterineto amin'izao fotoana izao dia ny hoe: oviana vao ho azo idirana indray ireo tranonkala ireo ?
(Sary fanaingoana  noforonin'ny mpampiasa Twitter junde,  avy amin'i Rebecca MacKinnon )
Lahatsoratra momba izany ihany (amin'ny teny anglisy):
Rebecca MacKinnon – China Mibahana Ny Twitter, Flickr, Bing, Hotmail, Windows Live, etc. Mialoh ny Faha-20 taonan'ny Tiananmen 
Danwei – Twitter sy Tranonkala Hafa Boabahana ao Shina Mandraka androany. 
Guardian – China misakana ny Twitter, Flickr sy Hotmail mialha ny tsingerintaonan'ny Tiananmen 
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/07/29/123435/
 manamarina ny fanakanana ny Twitter: https://www.herdict.org/web/explore/detail/id/CN/2633
 afaka nidirana ary avy eo nosakanana ny Youtube: https://www.herdict.org/web/explore/detail/id/CN/2071
 ny imailaka Hotmail: https://www.herdict.org/web/explore/detail/id/CN/6391
 ilay Rindrinafo Lehibe mpiambina ny aterineto ao Shina): http://fr.wikipedia.org/wiki/Censure_de_l%27Internet_en_R%C3%A9publique_populaire_de_Chine#La_Grande_Muraille_pare-feu_de_Chine
 fidirana amin'ny tolotra kilasy fahatelo: http://www.kenengba.com/post/1136.html
 Sary fanaingoana: http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/asia/article6414510.ece
 Twitter sy Tranonkala Hafa Boabahana ao Shina Mandraka androany.: http://www.danwei.org/net_nanny_follies/twitter_domain_blocked_in_chin.php
 China misakana ny Twitter, Flickr sy Hotmail mialha ny tsingerintaonan'ny Tiananmen: http://news.yahoo.com/s/nm/20090602/wl_nm/us_china_internet